Dhamma Yanant: နေရာမှန်...
Dirt is not dirt, but only something in the wrong place.
အညစ်အကြေးဆိုသည်မှာ အညစ်အကြေးမဟုတ်၊ နေရာမှားသော ပစ္စည်းသာ ဖြစ်၏။
အင်္ဂလိပ် ဝန်ကြီးချုပ် 'လော့ဒ် ပေါလ်မာစတန်'
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ ရှင်ဘုရင်ပါပဲနှင့် ရွှေပြည်တန်သော ဆောင်းပါးများထဲက 'မှတ်ထား-တဲ့' ဆောင်းပါးမှာ နေရာမှားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖတ်လိုက်ရတော့ ရုပ်ဝတ္ထု နေရာမှားတော့ အမှိုက်ဖြစ်သလို စိတ်နေရာ မှားရင်လည်း အမှိုက်ဖြစ်သွားတတ်တာပဲလို့ အတွေးရောက်မိပါတယ်။
မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိရမယ့် ဖုန်ဟာ မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိနေရင် အမှိုက် မဖြစ်ပေမယ့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုခုပေါ် ရောက်သွားရင် အမှိုက်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ ခေါင်းပေါ်မှာ အမြတ်တနိုး သထားတဲ့ ဆံပင်ဟာ ထမင်း၊ ဟင်း စတဲ့ စားစရာထဲ ရောက်သွားရင် အမှိုက်အဖြစ် စက်ဆုပ်ရွံရှာတတ်ကြပါတယ်။ ထမင်းပန်းကန်ထဲမှာ ရှိရမယ့် ထမင်းဟာ စာအုပ်ပေါ် ရောက်နေမယ်ဆိုရင်လည်း အမှိုက် ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ လူကြီးတောထဲ ကလေးဝင်ရင်လည်း အမှိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတောထဲ လူကြီးဝင်ရင်လည်း အမှိုက်ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိရမယ့်နေရာမှာ ရှိမှသာ တန်ဖိုးရှိပြီး၊ ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ မရှိရင် စက်ဆုပ်စရာ အမှိုက်အဖြစ် တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ စိတ်ဆိုတာလည်း ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ တည့်တည့်မှာပဲ ကျရောက်နေမယ်၊ သူ့ကို သတိနဲ့ ဖမ်းပြီးသိပေးနေနိုင်မယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးရှိပေမယ့် အတိတ်ကိုပြန် အနာဂတ်ကိုကြံပြီး နေရာလွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ များသောအားဖြင့် အကုသိုလ်တွေသာ ပွါးဖို့ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဟာ အတိတ်အာရုံတွေထဲမှာ ကြိုက်တာလေးတွေ ပြန်တွေးပြီး လောဘ၊ မကြိုက်တာတွေနဲ့ တွေ့တော့ ဒေါသဖြစ်ပြီး အကုသိုလ် အတိုးယူနေမယ်၊ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတွေးပြီး သာယာနေမယ်၊ ပူပန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မသန့်ရှင်းတဲ့၊ ညစ်ပတ်နေတဲ့ စိတ်အမှိုက် ဖြစ်သွားမှာပါပဲ။
စိတ်ဆိုတာ အာရုံတစ်ခုတည်းကိုပဲ သိတတ်တဲ့အတွက် မိမိစိတ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ လိုက်သိပေးနေနိုင်ရင် တခြားဘာအကုသိုလ်အာရုံမှ ၀င်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကို နေရာမှန်ရှိတဲ့စိတ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ စိတ်ကို နေရာမှန်နေစေဖို့ဆိုရင် နေရာ အမှန်၊ အမှားကို ခွဲခြားသိတတ်တဲ့ ပညာ လိုပါတယ်။ အဲဒီပညာကိုရဖို့ဆိုရင် စာကောင်းပေမွန်တွေ ဖတ်ခြင်း၊ လေ့လာသင်ကြားခြင်း၊ မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်း၊ ဆရာသမားကောင်းများထံမှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတရား နာကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ နေရာမှန်ကို သိပြီဆိုရင် အဲဒီနေရာ(အာရုံ)မှန်မှာ စိတ်ကို ထားနိုင်ဖို့အတွက် ယောနိသောမနသိကာရနဲ့ မှန်ကန်စွာ နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီ အာရုံမှန်မှာ ဆက်လက်တည်နေစေဖို့ဆိုရင် သတိအစောင့် လိုပါတယ်။ သတိအစောင့်မြဲအောင် ဝီရိယလေးက ထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်။ ပညာနဲ့ ထိန်းညှိထားတဲ့ ၀ီရိယလေးက သေခြင်းကင်းရာ နိဗ္ဗာန်အထိ ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာ နေနိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်ဂုဏ်ဒြပ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့နေရာမှာ နေတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့သူတွေဟာ ရှေ့သွားခေါင်းဆောင် နေရာမှာလည်း နေနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိလို့ မနေနိုင်။ နောက်လိုက်နေရာမှာလည်း မိမိကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးပြီး မနေလို။ ရှေ့လိုလို နောက်လိုလိုနဲ့ ကန့်လန့်တိုက်ပြီး အမှိုက်အဖြစ် ရှုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို မရှုပ်ဘဲ ကာယအားသန်တဲ့လူက ကာယအလုပ်နေရာ၊ ဥာဏအားသန်တဲ့လူက ဥာဏအလုပ်နေရာ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ နေရာတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အမှိုက် ဖြစ်မလာတော့ဘဲ တန်ဖိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။
နွားချေး စတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါ၊ စက္ကူစုတ်ကို ပြန်ကြိတ်ပြီး စာအုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ၊ ပလတ်စတစ် အမှိုက်တန်ချိန်များစွာကို ဖိအားပေးပြီး လမ်းခင်းလိုက်တဲ့အခါ အမှိုက်ဟာ အမှိုက်မဟုတ်တော့ပါဘူး။၊ ဘီယာဘူးခွံနဲ့ အိမ်ဆောက်တာတွေ၊ ပုလင်းအဖုံးတွေနဲ့ အခန်းအလှဆင်တာတွေ၊ အုန်းခွံတွေနဲ့ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းလေးတွေလုပ်တာတွေ စသဖြင့် နေရာမှန်အောင်သာ ထားတတ်မယ်ဆိုရင် အမှိုက်တောင်မှ အမှိုက်မဟုတ်တော့ဘဲ တန်ဖိုးရှိသွားပါတယ်။ နေရာသာမှန်မယ်ဆိုရင် ဘီလုံးငှက်ငယ်လေးတောင် အနိုင်ကျင့်နေကျ အင်အားကြီးမားတဲ့ သိန်းငှက်ကြီးကို သေပွဲဝင်အောင် စွမ်းနိုင်ပါတယ်။
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အဆုံးအမ ရှိပါတယ်။ ''ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ထက် ကောင်းသောအချိန်မရှိ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကို နိဗ္ဗာန်ထိ အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပါ'' တဲ့။ နေရာမှန်တဲ့စိတ်နဲ့ သတိပဌာန်တရား ပွါးများပြီး နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။ တစ်ဘ၀စာ၊ တစ်နှစ်စာ၊ တစ်လစာ၊ တစ်ရက်စာ၊ တစ်နာရီစာ၊ တစ်မိနစ်စာတွေ အသာထားပြီး တစ်စက္ကန့်စာလေးပဲ စိတ်ကို နေရာမှန်မှာ ထားကြည့်ပါ။ လုပ်လိုက်သမျှကို အသိကပ် နေကြည့်ခိုင်းတာပါ။ ကြည့်တာ၊ လှမ်းတာ၊ သွားတာ၊ စားတာ၊ သောက်တာ၊ အလုပ်လုပ်တာ စသဖြင့် နေ့စဉ်ကိစ္စအားလုံးကို "ငါ ဒီတစ်စက္ကန့်လေးပဲ စိတ်ကို ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် နေရာမှန်ကျအောင် ထားမယ်" လို့ တစ်စက္ကန့်ချင်း ပိုင်းပြီး သတိလေးကပ်ထားကြည့်ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ထက် မှန်တဲ့နေရာ မရှိပါဘူး။ နေရာမှန်တဲ့စိတ်လေး တစ်ခဏဟာ သံသရာတလျှောက်လုံး နှိပ်စက်လာတဲ့ ထုထည်အင်အားကြီးမားလှတဲ့ ကိလေသာရန်သူတွေကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းသတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အထိ စွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိမိတို့အနေနဲ့ လူ့အမှိုက်မဖြစ်ချင်ကြလို့ လူမှန်၊ နေရာမှန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြသလို မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ကလေးကိုလည်း သတိပဌာန် ၀ိပဿနာနဲ့ စိတ်မှန်၊ နေရာမှန် ဖြစ်အောင် ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ရအောင်။ အတွင်းနေရာကိုသာ မှန်အောင်ထားတတ်ပြီး စိတ်ပါမယ်ဆိုရင် အပနေရာတိုင်းဟာ တရားအားထုတ်ရာ ရိပ်သာတွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါလား...။
This entry was posted on 6:50 PM and is filed under article . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
မဟာပဌာန်း ဒေသနာတော် (၂၄)ပစ္စည်း ဆုတောင်း
သန်လျင်တောရ ၀ိပဿနာ မိတ်ဆက် (၁)